Linux Kernel x32 dhizaini inogona kumiswa | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura email yakaburitswa kuburikidza neLinux Kernel tsamba yekutumira uye iyi email ine senge chinangwa chayo chikuru bvisa kodhi kubva kuiyo x32 subarchitecture kuitiswa (kwete kuvhiringidzwa ne x86 IA-32).
Izvo zvinokutendera iwe kushandisa iyo 32-bit memory yekunyorera modhi (hybrid x86 uye x86_64) pane x86 64-bit masisitimu.
Chii chinonzi x32 architecture?
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti iyo x32 sub-yekuvakisa ndeye hybrid x86_64 ABI, iyo inobvumidza 32-bit memory yekunyorera modhi kuti ishandiswe pane makumi matanhatu neshanu masystem (iyo processor inoshanda mune 64-bit modhi, asi inoshandisa 64-bit zvinongedzo uye arithmetic mashandiro).
ABI X32 inobvumidza maficha kutora mukana wakazara we x86_64 mapurani, senge mamwe marejista uye nekukurumidza mirairo, PIC ABI.
Panguva imwecheteyo, ABI X32 inotsigira 32-bit memory pointers, iyo inochengetedza ndangariro, inobatsira mukuzadza kwakanyanya kweprosesa cache, uye ine pesvedzero yakanaka pane yakazara kumhanya kwekodhi kuitisa.
Kukamurwa kweABI X32 ndiko kusakwanisika kwekutungamira kupfuura 4 GB yekurangarira kubva kuchishandiso.
Tsigiro yeX32 yanga iri chikamu cheLinux Kernel kubvira payakaburitswa 3.4, yakaumbwa muna Chivabvu 2012.
1 Vagadziri vanozoita nharo kuti vaenderere mberi nekuchengetedza kweichi chivakwa kana kwete
1.1 Tsamba yacho:
Vagadziri vanozoita nharo kuti vaenderere mberi nekuchengetedza kweichi chivakwa kana kwete
Sekureva kweanogadzira achikurudzira kubviswa kweiyo x32 tekinoroji haina kururamiswa uye haina kuwana chishandiso chinoshanda mune zvemazuva ano maindasitiri marongero.
Kunze kwezvo, uyel x32 kodhi inoshandisa nzira ine gakava yekushanda nema system mafoni, iyo inogadzira njodzi yekukanganisa mashandiro akajairika mushure mekugadzirisa maitiro ekufona kuita.
Linus Torvalds akati anobvuma kubvisa x32 kana pasina nharo dzakatumirwa kana kana masisitimu mune iyo x32 subarchitecture yakashandiswa isina kuunzwa.
Linus zvakare akacherekedza kuti kushandiswa kweiyo x32 dhizaini kwaive kuri pachena kune kwakanyanya kuita kwekuyedzas, sekutsigirwa kweiyi subarchitecture inosanganisirwa nematambudziko akawanda mukuchengetedza kupihwa uye nharaunda yekusimudzira.
Mhoroi vanhu vese.
Ndiri kufunga zvakanyanya kuendesa chigamba kubvisa x32 rutsigiro kubva kuLinux. Heano mamwe matambudziko neizvi:
Hazvina kunyatsojeka kuti ine vashandisi. Sekuziva kwangu, inotsigirwa paGentoo naDebian
Maitiro ekufona system anoshamisa kwazvo. Mazhinji masikirini pa x32 anopinda kuburikidza ne * yavo * (i.e. kwete COMPAT_SYSCALL_DEFINE) nenzvimbo yekupinda, uye izvi ndezvekuda.
Semuenzaniso, adjtimex () inoshandisa yekuzvarwa yekuisa, kwete iyo inopinza yekuisa, nekuti iyo x32 struct timex inoenderana neiyo x86_64 dhizaini. Asi mashopu mashoma ane mapindiro ekupatsanura - aya ndiwo masikirini anotangira pa512.
Izvi zvinopinda kuburikidza ne COMPAT_SYSCALL_DEFINE mapoinzi ekupinda.
X32 masikirini asiri * muiyo 512 renji anotyora mamiriro ese eiyo kernel syscall musangano.
Mune syscall vanobata, in_compat_syscall () inodzoka ichokwadi, asi iyo COMPAT_SYSCALL_DEFINE yekupinda haina kukumbirwa izvi kupenga uye iwe unomhanyisa njodzi yekutyora zvinhu kana vanhu vadzora yavo syscall kuitisa.
Uye pamusoro pazvose, hapana anoedza zvinhu izvi.
Pane imwe nguva Paunenge uchiyedza x32, mumwe wevagadziri veGentoo akagumisa kuti kugadzirisa mashandiro kana uchichinjira kuABI x32 hakuna kukura sekuratidzwa kwekuyedzwa kwekugadzirwa Kubva kune vanogadzira ABI x32:
kufambira mberi kwakakosha kunoonekwa chete kana tichienzanisa neyekutanga x86 dhizaini, asi kana ichienzaniswa neyazvino x86-64 dhizaini, iyo pfuma haina basa (SPEC bvunzo nevakagadziri ve x32 yakaratidza kusvika makumi mana muzana kumhanyisa zvichienzaniswa neiyo yekare ABI x40_86, bvunzo iine H.64 codec yakaratidza kuwedzera kwe264-15%).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Kernel x32 dhizaini inogona kumiswa